९३ वर्षीय डिलानाथ ८२ वर्षपछि जन्मथलोमा पुग्दा…. – SUDUR MEDIA
जानकारी मनोरञ्जन रोचक
April 26, 2021 April 26, 2021 AdminLeaveaComment on ९३ वर्षीय डिलानाथ ८२ वर्षपछि जन्मथलोमा पुग्दा….
काठमाडौँ, १३ वैशाख। रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका–६ का डिलानाथ अधिकारी ११ वर्षका उमेरमा घर छाड्न विवश हुनुभयो । आमाबुवाको निधनपछि सहाराविहीन बन्नुपर्दा उहाँ घर छाडी हिँड्नुभयो । घर छाडेको ८२ वर्षपछि अधिकारीले जन्मस्थल पुग्ने अवसर पाउनुभयो । जन्मस्थल पुग्न पाउँदा उहाँ अहिले निकै खुशी हुनुहुन्छ । सानो उमेरमै घर छाड्नुपरेकामा उहाँमा निकै पीडा थियो । त्रियानब्बे वर्षीय अधिकारीलाई बुढ्यौली लागेपछि भने घर जाने इच्छा तीव्र भएको थियो ।
बयासी वर्षपछि काठमाडौँको नवजीवन परोपकार समाजले जन्मगाउँ पु¥याइदिएका रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका वडा नं ६ का ९३ वर्षीय डिलानाथ अधिकारी छरछिमेकीसँग । ः तस्बिर अर्जुन भुसाल÷रासस
स्थानीयवासी दुर्गाप्रसाद श्रेष्ठले सहयोग गरेका कारण जन्मठाउँ पत्ता लगाउन सजिलो भएको उहाँले बताउनुभयो । अधिकारीका दाजुभाइ कोही छैनन् । उहाँका नाममा रहेको जग्गा पनि अर्कैका नाममा नापी भइसकेको रहेछ । अधिकारीको नागरिकता बनाउन पहल थालिएको वडाध्यक्ष शिवप्रसाद न्यौपानेले बताउनुभयो । नागरिकता बनाउने विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरिएको छ । उहाँलाई अहिले नजीकैका दाजुभाइका घरमा राखिएको छ । अधिकारीले आश्रममै बस्ने इच्छा व्यक्त गरेकाले केही दिनपछि लिएर राखिने दाहालले जानकारी दिनुभयो । रासस